रवि लामिछाने पक्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले भने : २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा बाँकी भिडियो खोई ? – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण ३१, शुक्रबार १५:५८ [post-views]
काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनिले आफुलाई रवि लामिछाने सहित ३ जना आत्मा हत्या गर्न वाध्य बनाएको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भए पछी प्रहरीले बिहीवार नै तिनै जनालाई पक्राउ गरेको छ।
न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ बिहीवार नै पक्राउ गरेको हो । पत्राउ परेका तिनै जनालाई गए राती नै चितवन ल्याईएको छ ।
रवि लामिछाने पक्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले यसो भनेका छन् :
रबिजी Rabi Lamichhane प्रकरणमा प्रचलित कानुनको सम्मान गर्दै …
नम्बर १, आत्महत्या गरेको मान्छेको पकेटभित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ? उसलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो त अनुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारीबाहेक अरु कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैन/मिल्दैन ! यदि अपराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन किन भुलियो ? कुल २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा खोई बाँकी भिडियो ? अरु पनि त आरोपित हुनसक्छन् ?
नम्बर ३, जनहितसम्वन्धि कार्यक्रम प्रशारणको अन्तिम तयारीमा रहेकावेला एउटा पत्रकारलाई कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिई केवल डेढ घण्टाअगाडि टेलिभिजन स्टेशनबाटै पक्राउ गर्दा के त्यो न्यायिक हुन्छ ? जबकि उसले सार्वजनिकरुपमा भनिसकेको छ ‘यदि म दोषि ठहरिए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार छु ।’ भोलि फेरि कसैलाई यस्तै पर्यो भने … ???
नम्बर ४, नेपाली पत्रकारितामा यो ‘ग्याङ्फाइट’को इतिहासले नेपाली समाजलाई अति-तल गिराएको छ, यसमा हाबि अतिवाद् रबिजी बिरोधी र समर्थकले समाजको रंग कुरुप देखिएको छ ! अब एउटा बिन्दूमा हामी सबै मिलौं । पत्रकारिता अब सूत्रभन्दा माथि आयो कृपया, सबैले बुझौं ।
यी चार सवनलहरुका साथ हामी संसारभरबाट बोल्न तयार छौं । के यी प्रश्नहरु गलत छन् ? अब दुनियाँ साँघुरो भइसक्यो । हामी न्यायका निम्ति जहाँसुकैबाट बोल्न तयार छौं ।
कृपया रबिजीलाई ‘अतिदेवत्वकरण र अति राक्षसिकरण नगरौं’ संयमतापूर्वक सम्मानित अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गरौं।
रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले पहिलो पटक मुख खोलिन् (भिडियो)